IETT Recycles 40% nke mmiri Ọ na-echekwa | RayHaber | raillynews
[17 / 02 / 2020] SAMULAŞ debara aha ya nke oma	55 Samsun
[17 / 02 / 2020] Ngwa mkpesa dara ada na Metrobus	34 Istanbul
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulIETT Recycles 40% nke mmiri Ọ na-enyocha
24 / 01 / 2020 34 Istanbul, IETT, General, Ụzọ Awara Awara, oru, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
IETT na-emepụtaghachi pasent 40 nke mmiri ọ na-a .ụ. Ọ na-azọputa mmiri ruru puku kubit 84 kwa afọ.
Taa, mgbe a na-ahụ mmetụta zuru oke nke okpomoku ụwa, mkpa ọ dị ịba mmiri na ịrụ ọrụ nke ọma na-abawanye. IETT, nke na-ewetara ihe dị ka nde mmadụ anọ nke Istanbul na ndị ha hụrụ n'anya, na-elebara ntughari mmiri nke eji eme nhicha ụgbọala.
Site na akụrụngwa ọgwụgwọ anụ ahụ na kemịkalị guzobere na 13 n'ime ọdụ ụgbọ ala 6 nke IETT nwere, enwere ike imegharị mmiri adịghị mma.
Ichekwa ego, ihe omume gbadoro mkpa ezinụlọ bụ afọ 4 afọ 543 ezinụlọ.
Ichekwa mmiri kwa afọ na nnukwu ụgbọ mmiri IETT bụ puku kwuru puku mita 84, 729. Water waterụ mmiri kwa ụbọchị ezinaụlọ mmadụ anọ dị mita 13. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ego a na-enweta na ọdụ ụgbọ mmiri IETT kwekọrọ na mmiri mmiri 4 nke ezinụlọ nke 543.
Ntughari mmiri nwekwara uru ego maka IETT. N’afọ 2019, Garaị Anatolian chebere 57 n’ihi mgbake mmiri, puku iri abụọ na Edirnekapı Garage, puku iri abụọ na anọ na Hasanpaşa Garage, puku puku iri, narị abụọ na iteghete Garakitelli Garage na puku puku atọ na Kağıthane Garage.
Vchekwa $ 337 TL kwa afọ
Nzoputa kachasi mkpa di na Ayazağa Garage. Ọdọ Ayazağa Garage, ebe mmiri na-anakọta kwa oge, na-emepụtaghachi karịa mmiri ọ na-eji. N'afọ gara aga, mmiri gbanwere mmiri dị puku iri abụọ na puku iri na ise na puku iri na ise ka ọ bụrụ ọdọzağa Garage, bụ nke nyere aka nke ukwuu n'ịchekwa mmiri, wee rụpụta ihe dị ka puku kwuru puku isii.
Mgbalị ndị IETT iji belata mkpofu mmiri dọtara mmasị nke ọwa United Geographic nke United States. IETT garages achọtara mkpuchi sara mbara na akwụkwọ "25 lita" nke emere n'afọ gara aga. https://www.natgeotv.com/tr/belgeseller/natgeo/25-litre
A na-emezigharị mmiri eji eme nhicha ugbo ala iett
Ikwenye na Verusa natara 40% nke Aldem Steel
E mechara 40 nke pasent atọ nke Ọdụ Ụgbọelu nke atọ
Minista Arslan: UM 40 nke ndị obodo anyị zutere YHT Bakan
40 nke Energy Akçaray
Japanese TAISEI ụlọ ọrụ 150 na-eme ka nrọ ahụ ghọọ eziokwu
Paris na-eme ka ebe obibi ndị mmadụ dị na ebe obibi
Obodo nke Erzincan Na-agbanwe oge ọ bụla iji jee ozi
Nzube 51 na usoro okporo ígwè anaghị akwụsị
IETT 22 Pasent Rịbaa 50 na Septemba
Minista Yildirim: Yht Line 95 Percent of Infrastructure, 35 Percent of Superstructure OK
Russia 2014 bidoro ngwugwu na Sochi Winter Olympics (Video)
A na-achọgharị igwefoto na ugbo ala
Gbọ mmiri IETT
Ngwa mkpesa dara ada na Metrobus